Lapho besebenza ngesikhathi kwedeski izibani okuhle - isidingo. Ithebula Isibani isitshudeni - njengoba into oyifunayo, kanye nomqondisi wenkampani. Ukukhetha wabo omkhulu kulezi zinsuku. Asithathe ukubukeka kancane eduze ngalesi izesekeli ewusizo: ukuthi kuyini nokuthi yini okumelwe siyibheke lapho ukhetha.
izibani Ithebula samuntu classically libe izingxenye ezintathu. Lokhu base, insika, kanye nalokho okuthiwa diffuser ukukhanya. Lesi sakamuva singabangela yakhelwe njengendlela ithunzi lelambu ophahleni noma yendwangu ingilazi, ngezinye izikhathi kube isikhencezo i material opaque. Umthombo ukukhanya singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela ezivamile ukukhanya Isibani kanye Fluorescent noma isibani LED.
Namuhla, ngendlela sima siqine amalambu energy esisindisa. Ngezinye intengo kuqhathaniswa ephezulu (kuqhathaniswa evamile), banayo ukuphila isikhathi eside kakhulu inkonzo, ukhwaliti amandla ukusetshenziswa, design zesimanje. Futhi ekugcineni sikhokhele izindleko.
Cishe njalo, umklamo ithebula isibani inikeza inkinobho esisogwini phansi noma intambo kagesi (akuvamile ku base).
Ngezinye izikhathi umklamo kohlelo inikeza okwesikhathi dimmer ikuvumela ukulungisa ukukhanya izibani.
izibani Ithebula, zibone ngeso lengqondo ubona, uyisibonelo esihle we luminaire yesimanje icwecwe futhi ergonomic.
teluhlaka yangaphandle ingahluka kakhulu kuye ngokuthi ukusetshenziswa okuhloswe kwesibani. Classic edeskini isibani asetshenziselwa ikhanyisa kwedeski. Akazange enamathiselwe, simile phezu flat. Rassseivatelem ngokuvamile ukhonza njengomdala ikhava ingilazi noma emthunzini yendwangu.
Design edeskini isibani singasikhanyisela zenziwe zakudala noma Retro-isitayela - nge umthunzi omkhulu lendwangu ezibizayo, ehlotshiswe emiphemeni, ne yokuma okwenyanga, ngokuvamile ngempela omkhulu. Noma mhlawumbe super-yesimanje noma Futuristic - umcabango Abaklami umkhawulo alikho. Ngokuvamile, lezi izibani kukhona umthombo eyodwa yokukhanya, okungenani emibili noma emithathu.
Sakhiwo ezifanayo ube izibani eliseceleni kombhede futhi isibani. Avame ibe ncane kune- isibani itafula itafula, kodwa ukubukeka izinto musa ihluke kubo.
Ilambu phezu ngocingo
Isibani phezu ngocingo - isibani nge nokubopha etafuleni. It has a ngocingo lapho ligxile phezulu yetafula noma kweminye ebusweni. A kukholomu isibani enjalo eyenziwe umklamo nezimo, okuvumela ukuba ulungise umthombo wokukhanya ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi oyifunayo. Njengomthetho, it has a insimbi non-okusobala, ngokuthumela ukukhanya ukugeleza lokugcilwe kuto ngco.
izibani ezinjalo azivamile ukuba keyboard ukushintsha ithengiswe nge ama inhlobo efanele futhi isilinganiso amandla. Sinenkosi isisindo ongaphakeme (eyodwa kilogram) futhi ukhululekile ngokwanele intambo obuphelele kusukela amamitha amabili.
Isigaba "ukufunda isibani ngocingo 'isicelo zalapho phezu clothespin. It svetilnichki ngokuvamile miniature ngaphandle amadolo multistage, ehlanganisa diffuser compact kanye clothespin-umnikazi. Ukukhweza kwi usule bona smallish kodwa ngokuphelele efanelekayo ngokudala ekusakazeni phezulu ukukhanya. Ukuze wenze lokhu, basuke eqondiswa eshalofini yokubeka, amehlo aphumele ngaphandle izingxenye ifenisha. Lokhu svetilnichek engasindi futhi icwecwe babiza ngisho bekotele ukhaphethi udonga. Ngenhlanhla zikhona eziningana izibani encane efanayo phezu clothespin in engele ezahlukene, ongayifinyelela owokuqala ukhululekile kakhulu ukukhanyisa izixazululo.
izibani Ithebula, isithombe phambi kwakho, layo design yesiteleka ezihlukahlukene imibala uyojabula umfundi noma umfundi.
Iinsetjenziswa isibani ngocingo
Ithebula nesibani ngocingo nge nokubopha itafula, njengoba umthetho, has a uhlobo adaptha yamandla, iza diffuser emnyama noma emhlophe, nakuba Yiqiniso, kungase kube ezihlukahlukene Izinketho zemibala. Ilambu izindlu senziwa metal and plastic. Ezansi kukholamu kukhona isango lokukhuphula kanye kokungathembeki okunokwethenjelwa phezu kwetafula.
Ukuze uhlelo lokuhlelwa kabusha ukugeleza ukukhanya ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi oyifunayo ihlinzeka ngendlela yokuba yokuxhuma umnikazi izixhumanisi ikholamu nokwakha kwezimo ezifanele sokukhanyisa we ebusweni ukusebenza kwanoma iyiphi ithebula iphuzu. Ikholomu inezingxenye eziningana, lomnyango okwaziyo ukugcina ukujikeleza ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi. Ezansi kukholamu has ubakaki nge isikulufa clamping, ngawo ungakwazi kalula ulungise isibani phezu usule.
Uyini ngocingo? Ngaphandle, indlela enjalo efana a clothespin nge ehambisana kunoma iyiphi indawo. Luminaire ngocingo ezinjalo ingafakwa cishe yonke indawo ukunikeza iyunifomu ukukhanya ecucuza ukusatshalaliswa phezu kwawo wonke endaweni yokusebenza. Lokhu kungenzeka kubaluleke kakhulu noma ubani ongumKristu uchitha isikhathi esiningi ngemuva kwedeski.
I ukushuba kwamanzi okuyinto yanamathela ngocingo ithebula isibani bengase bazikhandlele 5-6 amasentimitha. Lokhu kukuvumela ukukulungisa, hhayi kuphela kwi-edeskini okujwayelekile (ukushuba we usule ngokuvamile mayelana 3 amasentimitha), kodwa futhi efasiteleni noma banebhentshi egalaji.
On izinzuzo izibani ezifana
Inzuzo enkulu isakhiwo esinjalo - ngokuphindiwe wabhekisela kungenzeka ukulungisa engela kwesifo ugongolo ukukhanya ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi okungukuthi cishe ongenakuwufinyelela izibani etafuleni ezivamile.
Enye inzuzo ebaluleke - ukonga isikhala phezu kwedeski, okuyinto, njengoba umthetho, entulekayo. Kanye ukuphepha - sibonga yasibamba onokwethenjelwa Isibani cishe ayifakiwe ngisho kungenzeka kancane ke ilele off etafuleni.
izibani okunjalo ngokuvamile kube kulula ukuqhubeka, isibonelo, ngaphezu kwekhanda noma umengameli ezingeni. Amandla esetshenziswa izibani ikhethwa ngokufanele ngayinye imodeli ngabanye. Ngemva kokufunda isibane ukuthi umfundi kumelwe, phakathi kwezinye izinto, ukuvikela ukungaboni zezingane.
Nokho izinzuzo amadivayisi zibala umklamo yesimanje kanye nekhono uwafake emaqaqasini kwanoma yisiphi isitayela - kokubili ekhaya futhi ehhovisi. isizukulwane yakamuva izibani - izibani Fluorescent noma LED - sihle egumbini yokusebenza noma egumbini lokuphumula hi-tech isitayela.
I yokuntula zihlanganisa kuyadamba zabo kancane kancane rigidity kwesakhiwo, okuyinto nezikulufi sokuphumula ngokuhamba kwesikhathi. Ngenxa yalokhu, i-isibani singasikhanyisela kancane kancane aqala ukucwila, ayesephambuka isikhundla ohlosiwe.
Kodwa le nkinga esivela onobuhle ikakhulu ubudala. Isibani zanamuhla anemisila iziphethu steel, isandla esaziwa isakhiwo.
Njengoba elinye iphutha ngezinye izikhathi esibizwa design nzima. Amadolo izibani ngezinye izikhathi bengakwamukeli endaweni evalelekile, ikakhulukazi uma workstation ifakwe e niche iphahlwe ngenhla noma emashalofini esinanyathiselwe.
Ngokushesha kuyoba isendalini, isibani phezu ngocingo edeskini yanqoba ngokushesha emakethe. abathengi kweqiniso baye baqaphela yokusebenza kwalo ngezindlela eziningi, usizo lula okungakaze ukusebenza. Impendulo evela kumakhasimende kuyinto nokulungiseka ebanzi ukukhanya umthombo isikhundla babé okunqumayo lapho uthenga izibani ezinjalo. Enye ezingengaphansi ezibalulekile njengoba abathengi cabanga design zikanokusho ikhono ufaka isibani ngocingo e cishe kunoma iyiphi elingaphakathi.
Imithetho okusha nokuyala isikole ukushayela kakade amandla?
Izikhulumi Ikhompyutha: simo the best umsindo izinga